BEIRUT: GALLIPOLI UKUJONGWA KWEALBHAMU - IINDABA
UZach Condon uphinde wahlangana no-Farfisa wakhe wakudala kwi-albhamu yakhe yesihlanu, kodwa kungenjalo uhlala enxibe kakuhle kwigumbi lakhe lamavili.
UZach Condon ka-Beirut weza kwindawo yethenda ye-indie rock kwaye waphola apho ukusukela ngoko. Emva kweminyaka ephantse ibe yiminyaka emibini ehamba yedwa eNew York naseYurophu, ubuyile IGallipoli . Vula IGallipoli , UCondon usenza eyona nto kanye ebeyenza kule minyaka ili-13 idlulileyo-edala indawo, Indlovu 6 -e-indie pop evakala ngokungathi iyilungele isandi somfundi oselula wefilimu ozama ngaphambili njenge umbhali . Abo bangenako ukukhwela kwi-penny ye-Condon ye-twee abayi kutshintsha iingqondo zabo ngeli cwecwe, nokuba. Nangona kunjalo, kubaphulaphuli abayixabisayo i-indie pop kweliso layo elibanzi, le rekhodi yenza kanye loo nto. IGallipoli ayophuli ngokwenyani umhlaba omtsha, kodwa ukungqinelana kuyasebenzisana neCondon apha. I-albhamu yesihlanu yeBeirut iyehla malunga nokuthamba njenge-vanilla ethambileyo-isebenze phakathi ehlotyeni. Mhlawumbi ukukhanya kancinci kumxholo kwaye malunga nemizuzu eyi-10 inde kakhulu, kodwa IGallipoli ekugqibeleni iveliswe kakuhle kwaye imnandi ukuqala.
IGallipoli inokushwankathelwa ngokufanelekileyo njenge-albhamu yaseBeirut apho ilungu liyinkosi. I-backstory yerekhodi ihambelana kakhulu ne-ethos yaseCondon: Ngokusisiseko, wayenayo le Farfisa ehleli endlwini yabazali bakhe eSanta Fe. Ugqibe kwelokuba uyakudinga ukubuyela kwilungu lakhe ebomini. Ufumene ilungu. Malunga nelo xesha waqala ngokuzoba IGallipoli . Ukuphela kokugqobhozela kumphezulu we-albhamu elayishwe ngeenkwenkwezi ze-1970s ezichaphazelekayo. Ezi ngoma zili-12 zifudumele ngaphandle kwebala, zihlanjwe kukukhanya konomathotholo we-FM, kwaye zigxunyekwe erim zizinto zelitye le-indie kwezona zinobunkunkqele. Ingxelo ivakalelwa ngathi lixesha lokubuya umva ukuya kuthi ga kumhla we-psychology kaLaurel Canyon kwaye kwiintsuku ze-alt-rock zeminyaka edlulileyo apho unokubeka khona ukulele kwingoma kwaye ungabi nabantu bakugxume ngokungapheliyo. Ezi mvakalelo ziyahlangana kwi-albhamu eyanelisayo eponymous lead lead. Isilungu sayo esine plunky kunye necandelo lempondo elisikwe ngokucacileyo linobungangamsha obugqithisileyo be Idada yaseMandarin Ukuntywizisa amaphiko ayo echibini. Emva koko uCondon uqalisa ukuthambisa umbongo malunga nokusindiswa kwintlungu, kwaye imimoya esemazantsi yasasaza amafu ukusuka kwindawo enesinqe, ikwazisa nge-wink nangamashiya aphakanyisiweyo ukuba uyindoda efundileyo.
Iingoma zomoya zealbham zisebenza kakuhle. Ezi ayizizo iingoma ezingalibalekiyo (kwaye uCondon unayo utshilo kakhulu yena). Oku kubonakala ngakumbi kwisiqalekiso soSapho, esingacacanga malunga ne-dynamics yosapho kodwa ngendlela enjalo engabalulekanga kangako. Yintoni enomdla ngenene efakwe kulungelelwaniso lomkhondo: Imbewu yomatshini we-drum-oomatshini wokuvuna weediliya utyatyamba kancinci uye kwiokhestra epheleleyo. Umkhondo wokujikeleza weCorfu yinto ebonakalayo emangalisayo. Idityaniswe nezingqisho zeBalearic kwaye ibandakanya enye ye IGallipoli Ezona zinto zisetyenziswayo kukunyanzelwa kwamalungu omzimba. Enye yeengoma ezimfutshane ezikwi-albhamu, kuvakala ngathi luhlobo lwe-psych-kiss e-sun eza kudityaniswa kakuhle nomsebenzi ofana nokusela i-tallboy ngelixa umntu egcoba i-sunscreen emqolo.
Ngamanye amaxesha ukuthanda kukaCondon ukuthanda ukuphupha kuyatsala ngokwenene. IGallipoli ubukhulu becala yi-albhamu yomculo ongasemva, kunye neempawu zayo zodonga ezinokubangela ukujikeleza kwamehlo kunye nokudikwa. Ku-I Giardini, uCondon ucula ukuza kuthi ga ngoku emva komqala wakhe uziva ngathi nguMuppet, kwaye ngokubhaliweyo, izinto azonelisi ngokulinganayo. Ipiyano enesandi kunye neplodding percussion zivakalelwa ngokukhethekileyo, kude ngaphaya kwengoma yomgangatho oqhelekileyo wemizuzu emine. Emva koko kukho iLandlide, eyoyikekayo kubuhle bayo. Eyona nto intle kakhulu kwisitshixo esiphambili, umkhondo une-essence enokuchazwa njenge-hey-ho indie pop man weentaba ezihlangeneyo Isandi soMculo , esisiqhekeza sentloko.
Umculo weBeirut uya kuhlala uhleli ngo-2006 owazala i-albhamu yakhe yokuqala. Nokuba kukhutshwa ntoni uCondon, i-discography yakhe iya kuhlala inxulunyaniswa nostalgia yexesha elingenatyala le-indie rock. Akukho nto iphosakeleyo ngokuqhubeka nokwenza umculo okhathalayo okomzuzwana wenkcubeko esele idlulile. Ukuqhubeka kukaCondon ngokungakhathali nge-anachronism ngamanye amaxesha kuvelisa iziphumo ezithandekayo, nezinyanzelisayo. Ngamanye amaxesha, ukumamela umculo wakhe uziva ngathi uthetha nabahlobo abavela kwisikolo samabanga aphakamileyo olahlekileyo. Kukho izinto ezintle apha, kodwa ekugqibeleni, kunzima ukuba nemincili ngento evakalelwa ngokunzulu kwixesha elidlulileyo.
palo santo iminyaka kunye neminyaka
I-albhamu ephezulu yee-90s
Zonke iiziso kum tupac
iintloko ndiziva ndiphila
I-donald glover emnyama